Doonaald Tiraampi marii nagaa Afgaanistaan waliinii haqan - BBC News Afaan Oromoo
Mariin Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaaldi Tiraampi Taalibaan waliin geggeessuuf turan hirmaannaa Ameerikaan waggoota 18f waraana Afghaanistaan keessatti taasisaa turte kan goolabudha jedhamee abdatamee ture.
Pirezidaantii Afgaanistaan waliin wal arguusaanii tuwiitara isaanii irratti kan barreessan pirezidaanti Tiraampi erga hidhattoonni Taalibaan loltuu Ameerikaa ajjeesuu dhugaa ba'anii garuu marii iccitiidhaan qondaaltota biyyattii waliin mari'achuuf turan haquusaanii beeksisan.
Dho'iinsa boombii Kamisa darbe hidhattoonni Taalibaan raawwataniin namoonni 12 kan ajjeefaman yoo ta'u isaan keessaa tokko loltuu Ameerkaa gameessa ta'uu hidhattoonni Taalibaan beeksisaniiru.
Ameerkaan Afgaanistaan weeraruun hidhattoota Taalibaan kan hariite bara 2001 ture.
Hidhattoonni Taalibaan garee Al-Qaa'idaa Fulbaana 11, 2001 haleellaa raawwateef da'oo ta'uun gargaaraniiru jetti Ameerkaan.
Waajjirri damee siyaasaa Taalibaan kan magaalaa Doohaa keessatti argamu BBCtti akka himetti gareen hidhattoota Taalibaan murtee Tiraampi irratti dhoksaan mari'achuuf jedhu.
Waggaa 18ffaa yaadannoo guyyaa Ameerkaan al-Qaa'idaadhaan itti haleelamtee(Fulbaana 11, bara 2001) dursuun Mariin Ameerkaa fi Taalibaan gidduutti mari'atamuuf ture silaa hojii gaarii pirezidaanti Tiraampi hariiroo dippiloomaasii biyyoota lamaanii cimsuuf hojjetan ture.
Ameerkaan torbanoota 20 keessatti loltoota ishee 4,500 baasuuf akka turtee fi Taalibaan ammo gamasaatiin Kanaan booda maandhee shorokeessitoota akka hin taane marii geggeeffamuuf turerratti walii galuuf turan.
Yeroo ammaa Ameerkaan loltoota 14,000 Afgaanitaan keessaa qabdi.
Biyyoonni lameen maal barbaadu?
Pirezidaanti Tiraampi bara 2106 wayita filannoof duula na filadhaa geggeessaa turan hirmaannaa Ameerkaan waraana Afgaanistaan keessatti taasisaa jirtu akka goolaban waadaa galanii turan.
Tibbana garuu baay'ina loltoota isaanii Afgaanistaan keessatti jiranii gara 8,600tti hir'isuuf yaada akka qabntu himama.
Inumaa loltoota Ameerkaa Afgaanistaan keessa tursiisuuf kutannoon akka hojjetan ibsanii turan.
Ameerkaan loltootashee guutummaatti Afgaanistaan keessaa baasnaan gareen shororkeessitootaa biyyattii keessaa maandheffachuun biyyoota dhihaa haleeluu itti fufuu dand'au sodaan jedhu Waashingtan DC keessaa ammumarraa dhagahamaa jira.
Erga bara 2001 Ameerkaan Afgaanistaan weeraruun hidhattoota Taalibaan haleeluu eegaltee as inumaa gareen Taalibaan iddoowwan ijoo ta'an hedduu to'ataniiru.
Ameerkaan loltaata ishee hunda hin baastu taanaan mootummaa Afgaanistaan waliin gonkumaa akka dubbachuu hin feenu ibsa gareen Taalibaan.
Hidhattoonni Taalibaan bara 1996-2001 wayita aangoo irra turanitti seera amantaarratti cichuun akka hojjechaa turanii fi dubartoota gidirsaa akka turantu himama.
Erga waraanni Afgaanistaan eegalee as qaamolee addunyaa mararraa keessatti hirmaataa keessaa hanga yoonaatti 3,500 kan ta'an ajjeefamaniiru, kanneen keessaa 2,300 kan ta'an lammiilee Ameerkaati.
Dhaabbati Biyyoota Gamtoomanii gabaasa Guraandhala darbe baase keessatti namoonni nagaan 32,000 ta'an ajjeefamuu eereera.